Nsonaazụ nke mmetọ mmiri | Green Renewables
Nsonaazụ mmetọ mmiri
Portillo nke German | 27/04/2022 12:00 | Gburugburu
Ụwa na-echetara anyị ugboro ugboro na ọ dịghị ndụ na-enweghị mmiri, dị ka oké ọkọchị na-arịwanye elu nke na-eyi egwu inye mmiri ọṅụṅụ n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ụdị mmetọ mmiri dị iche iche na-eme ka àgwà nke ihe onwunwe a dị oké ọnụ ahịa na-akawanye njọ, nke na-anọchite anya ihe egwu na ahụike nke mbara ala. N'ụzọ dị mwute, n'ihi ọrụ mmadụ, mmiri na mmetọ bụ okwu abụọ nwere njikọ chiri anya. Ọtụtụ ndị na-amaghị nke ọma banyere Ihe si na mmetọ mmiri pụta.
N'ihi nke a, anyị ga-arara isiokwu a na-agwa gị banyere isi ihe na-akpata mmetọ mmiri na ụdị ya.
1 Ụdị mmetọ mmiri
1.2 Mmiri elu
1.3 ikuku oxygen
1.4 Mmetọ n'okpuru ala
1.5 Mmetọ microbial
1.6 Mmetọ ihe kwụsịtụrụ
1.7 Chemical mmetọ nke mmiri
1.8 Mmetọ nri
2 Nsonaazụ mmetọ mmiri
3 Nsonaazụ nke mmetọ mmiri na oke osimiri
4 Otu esi ezere nsonaazụ nke mmetọ mmiri
Ụdị mmetọ mmiri
Mwụfu mmanụ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile na-emetụta anụ ọhịa ma ọ bụ ndụ mmiri, mana ikike ịgbasa dị ukwuu.
Mmanụ ahụ na-arapara n'ájá nnụnụ mmiri, nke na-egbochi ikike igwu mmiri ma ọ bụ ofufe na-egbu azụ. Mmụba nke mwụfu mmanụ na mwụfu mmiri ebutela mmetọ mmiri. Ihe dị mkpa: mmanụ a na-esighị ike n'ime mmiri ga-etolite nnukwu mmanụ n'ime mmiri, na-egbu azụ na-egbochi ọkụ sitere na osisi mmiri mmiri photosynthetic.
Mmiri dị n'elu gụnyere mmiri okike a na-ahụ n'elu ụwa, dịka osimiri, ọdọ mmiri, ọdọ mmiri na oke osimiri. Ihe ndị a na-abanye na mmiri na mmiri wee gbazee ma ọ bụ jikọta ya na anụ ahụ.
Enwere microorganisms n'ime ozu mmiri. Ndị a gụnyere aerobic na anaerobic ntule. Mmiri na-enwekarị microorganisms, ma ọ bụ aerobic ma ọ bụ anaerobic, dabere na ihe ndị na-emebi emebi kwụsịtụrụ n'ime mmiri.
Oke ụmụ nje na-eri ma na-eri oxygen, na-eduga na ọnwụ nke aerobic ntule na mmepụta nke toxins na-emerụ dị ka amonia na sọlfọ.
Mmetọ n'okpuru ala
Mmiri mmiri ozuzo na-esi na ala na-amịpụta ọgwụ ndị na-egbu egbu na kemịkalụ emetụtara ma na-amịnye ha n'ime ala, na-emetọ mmiri dị n'ime ala.
Ná mba ndị ka na-emepe emepe, ndị mmadụ na-aṅụ mmiri a na-adịghị edozi kpọmkwem site na osimiri, iyi, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ. mgbe ụfọdụ na-eme mmetọ eke sitere na microorganisms dị ka nje, nje bacteria na protozoa.
Mmetọ a sitere n'okike nwere ike ịkpata ọrịa mmadụ siri ike yana ọnwụ azụ na ụdị ndị ọzọ.
Mmetọ ihe kwụsịtụrụ
Ọ bụghị kemịkalụ niile na-adị mfe mgbaze na mmiri. A na-akpọ ihe ndị a "ụmụ irighiri ihe." Ụdị ihe ndị a nwere ike imerụ ma ọ bụ ọbụna gbuo ndụ mmiri.
Chemical mmetọ nke mmiri
A maara nke ọma ka ụlọ ọrụ dị iche iche si eji kemịkalụ a na-atụba ozugbo na isi mmiri. Agrochemicals ejirila oke arụ ọrụ ugbo iji chịkwaa ụmụ ahụhụ na ọrịa ha na-ejedebe n'osimiri, na-emebi ndụ mmiri, na-emebi ụdị ndụ dị iche iche ma na-etinye ndụ mmadụ n'ihe ize ndụ.
Ọtụtụ mgbe, anyị na-ekwu na mmiri nwere nri dị mma maka ndụ, n'ihi ya, ọ dịghị mkpa ka ọ dị ọcha. Ma ịchọta oke fatịlaịza nke ọrụ ugbo na nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mmiri ọṅụṅụ gbanwere foto niile.
Ọtụtụ mmiri mkpofu, fatịlaịza, na nsị nwere ọtụtụ ihe na-edozi ahụ nke nwere ike ịkwalite algae na ahịhịa na-eto n'ime mmiri, mee ka ọ ghara ịṅụ mmanya, na ọbụna na-ekpuchi ihe nzacha.
Mmiri fatịlaịza sitere na mmetọ ala ubi mmiri si n’osimiri, iyi, na ọdọ mmiri ruo n’oké osimiri. Fatịlaịza bara ụba na nri dị iche iche nke ndụ osisi chọrọ, na mmiri dị ọcha nke a na-esi na ya na-akpaghasị nguzozi nke ihe ndị dị mkpa maka osisi mmiri.
A na-eji ọgwụ anyị na-awụsa n'ụlọ mposi ma ọ bụ mmanụ anyị na-awụsa n'ime mmiri metọọ mmiri ahụ. Ihe mkpofu a na-atụba n'oké osimiri na osimiri bụ ihe atụ ndị ọzọ. Otu ihe ahụ na-eme microplastics, bụ ndị ntinye ya na oke osimiri na-abawanye ngwa ngwa. Dị ka United Nations si kwuo, plastik nde 8 na-ejedebe n'oké osimiri kwa afọ, na-agbanwe ndụ nke gburugburu ebe obibi ndị bi na ya.
Kpọmkwem, òtù mba ụwa a na-akọwa mmetọ mmiri dị ka mmetọ nke mmiri nke ihe mejupụtara ya na-agbanwe ruo mgbe ọ ga-abụ nke a na-apụghị iji mee ihe. Mmiri e merụrụ emerụ pụtara na ụmụ mmadụ apụghị iji akụ̀ a dị oké ọnụ ahịa mee ihe. Nke a na-emebi emebi na-anọchi anya ihe iyi egwu dị egwu na mbara ala ma ọ ga-eme ka ịda ogbenye nke ndị na-adịghị ike dịkwuo njọ.
Mmetọ mmiri nwere mmetụta na-emebi emebi na nchekwa gburugburu ebe obibi na ahụike nke mbara ala. Ụfọdụ n'ime ihe kachasị mkpa sitere na ụdị mmetọ mmiri dị iche iche bụ: mbibi nke ihe dị iche iche dị iche iche, mmetọ nke eriri nri, gụnyere mgbasa nke ihe ndị na-egbu egbu na nri na ụkọ mmiri ọṅụṅụ.
Nchekwa mmiri dị n'ime ala na-enye 80% nke ndị bi n'ụwa. 4% nke ihe nchekwa ndị a emetọọla. N'ime ụdị mmetọ mmiri niile, ndị bụ isi metụtara ọrụ mmepụta ihe mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị na ruo taa. Dịka ọmụmaatụ, kwa afọ, a na-atụba ihe karịrị cubic kilomita 450 nke mmiri mkpofu n'ime oké osimiri. Iji mebie mmetọ a, a na-eji mmiri dị ọhụrụ 6.000 cubic kilomita.
Dị ka Òtù Mba Ndị Dị n'Otu si kwuo, ihe ruru nde tọn abụọ nke nsị na-asọba na mmiri nke ụwa kwa ụbọchị. Ihe kacha mkpa na-ebute mmetọ bụ enweghị nlekọta na mkpofu nke mmadụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ugbo.
Ụfọdụ mmiri mmiri nwere ike imerụ nnukwu mmiri na obere mkpokọta. Ọmụmaatụ, Naanị lita 4 nke mmanụ ụgbọala nwere ike imerụ ihe ruru nde lita mmiri 2,8. Anụ mmiri dị ọcha na-apụ n'anya ugboro ise ngwa ngwa karịa anụ ala.
Nsonaazụ nke mmetọ mmiri na oke osimiri
Ebe mmiri kacha emetọọ bụ Oke Osimiri Mediterenian. Ógbè France, Spen na Ịtali bụ ụfọdụ n'ime ógbè ndị kacha emetọọ n'ụwa. Ndị na-esote na ndepụta a bụ Caribbean, Celtic, na North Seas. ihe kpatara ya? Mmiri mmiri, otu n'ime nsogbu mmetọ kacha njọ na oke osimiri. Ihe karịrị 60% nke ihe mkpofu na-abata bụ rọba. 6,4 nde tọn plastic Ha na-ejedebe n'oké osimiri kwa afọ.
Ọ bụrụ na anyị ahụghị ụwa anyị n'anya ma mee ihe iji kpochapụ mmetọ mmiri, oke osimiri nwere ike isi n'aka ndị enyi anyị na-ebelata mmetụta mgbanwe ihu igwe na-emetụta ndị iro anyị. Mmiri ndị a buru ibu na-arụ ọrụ dị ka mmiri mmiri maka carbon dioxide na ikuku. Nke a na-eme ka o kwe omume ibelata ikuku ikuku na mmetụta ọjọọ nke nsogbu ihu igwe.
Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkachamara si gburugburu ụwa na-adọ anyị aka ná ntị na ọ bụrụ na anyị agbanweghị àgwà anyị ma kwụsị ịgbanye gas a na-emerụ emerụ, ndụ n’oké osimiri agaghị adị ndụ n’ihi oke okpomọkụ, na nke ahụ ga-abụkwa ihe ọzọ anyị ga-etinye n’ime ya. akaụntụ.
N'aka nke ọzọ, ụkọ mmiri na nrụgide hydric bụ nsogbu ndị ọzọ anyị ga-eche ihu. Dị ka atụmatụ nke United Nations Environment Programme si kwuo, ka ọ na-erule 2025, ọkara nke ndị bi na mbara ala ga-eche ụkọ ihe onwunwe a dị oké ọnụ ahịa ihu. Mkpuru mmiri ọ bụla emetọọ taa pụtara mmiri furu efu echi.
Otu esi ezere nsonaazụ nke mmetọ mmiri
Izere mmetọ mmiri dị n'aka anyị. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe anyị nwere ike ime iji kpochapụ ọnụnọ nke mmetọ na mmiri anyị:
Belata ikuku carbon dioxide
Wepụ iji ọgwụ ahụhụ na ụdị kemịkalụ ndị ọzọ na-eyi ọdịdị anyị egwu
Ime ka mmiri dị ọcha
Ejila mmiri emetọọ gbaa ihe ọkụkụ mmiri
Nkwalite ịkụ azụ na-adịgide adịgide
Wepụ plastik ndị a na-eji otu eme ihe
Enwere m olileanya na site na ozi a, ị nwere ike ịmụtakwu banyere nsonaazụ nke mmetọ mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nsonaazụ mmetọ mmiri
Ụdị ọkụ ọkụ